Fampiharana | Solid Products Co., Ltd.
Fiantohana entana ho an'ny fanolorana fitaovana
Fiantohana entanadia fe-potoana lehibe. Mety hanondro ny fiarovana ny fandefasana kamiao fandriana fandriana io, mety hanondro ny fifehezana entana entintsika isan'andro ao amin'ny Fiaranao Fiara.
Solid Products Co., Ltd. dia nanomboka ny fandraharahana tamin'ny fanolorana ny tsena miaraka amin'ny vokatra fanaraha-maso ny entana Medium Duty.
Androany ny vokatray dia nitarina tamin'ny vokatra feno:
1) Bungee Cord - ho an'ny tanjon'ny mpanjifa maivana
2) Cam Buckle Strap - ho an'ny adidy ho an'ny mpanjifa
3) Ratchet Tie Down Strap - ho an'ny tanjon'ny mpanjifa mavesatra
4) Ratchet Strap sy Winch Strap ho an'ny indostrian'ny adidy mavesatra
5) Famonoana fiara - ho an'ny famindrana fiara
6) E strap strap - ho an'ny van anatiny
Indostria fanandratana sy hala-bato
Solid Products Co., Ltd. manana safidy lehibe ho an'ny orinasa fananganana, fananganana ary crane.
Ao amin'ny karazana vokatra sy serivisinay ho an'ny indostrian'ny fanorenana dia ho hitanao ny antsamotady webbing rehetra, fiofanana ary fizahana. Ny vokatray dia manana kalitao avo indrindra sy avy amin'ireo mpamatsy malaza manana traikefa an-taonany maro.
Afaka manolotra vahaolana feno amin'ny fananganana azo antoka izahay, izay zavatra ankasitrahan'ny mpanjifanay. Ankoatr'izay dia nokaramaina ho mpamatsy serivisy ho an'ny tetik'asa fananganana lehibe toa an'i China Petro sy ny "West Gas Eastward Transmission" an'ny China National Grid.
Slack Line dia fanatanjahantena malaza ho an'ny ivelany. Vokatra tady tariby io taloha. Na izany aza, lafo loatra izany ary mavesatra loatra.
Miaraka amin'ny fampiharana ny tadin'ny ratchet, ny làlan-kaleha dia manana fiainana faharoa. Ara-toekarena izany ary mora entina.
Andramo ny iray dia hahita fahafinaretana be ianao amin'ny filalaovana azy.
Fanarenana sy fanarenana any ivelany
Mba hilalaovana SUV 4x4 dia mila entana be dia be ianao. Ny zavatra iray azonay omena anao dia ny Recovery Strap.
Ny fehikibo fanarenana dia mety ho tady mitazona, fa a ny fehikibo dia tsy azo ampiasaina matetika ho fanarenana eny ivelan'ny lalana.
Aza adino fotsiny ny famerenana amin'ny laoniny ny adidy fanarenana dia andraikitra mavesatra foana ary tsy misy farango raha ny tadin'ny fehin-kibo kosa matetika dia ara-toekarena kokoa ary miaraka amina tadiny.
Raha te hahalala bebe kokoa, azafady mba manontania anay.